Indlebe ukudla okusemathinini kuvela akukho okubi kakhulu ukwedlula isobho, okuyinto okulungiselelwe usebenzisa izinhlanzi fresh. Ngaphezu kwalokho, lokhu dish isheshe futhi kube lula. Ukusebenzisa umkhiqizo okusemathinini, awunawo isidingo sokuchitha isikhathi sokulinda kuze kube iphekwe ngokugcwele. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Step by step recipe: indlebe ukudla okusemathinini phezu kwesitofu
Ukuze silungiselele lokhu isobho sidinga izithako kakhulu elula ukuthi zingatholakala kunoma iyiphi esitolo, okuyilezi:
saury Canned - embizeni ezivamile;
isanqante namanzi esiphezulu - 1 isiqephu ezinkulu;
Long-okusanhlamvu okusanhlamvu (irayisi) - 1/3 inkomishi Imi;
anyanisi White amunyu - inhloko esikhulu;
Lavrushka, usawoti iodized, phansi allspice - ukusebenzisa ngokubona;
uwoyela elicwengiweyo - cishe 25 ml;
amazambane amancane - 2 izicucu;
imifino kunoma iyiphi fresh - kweqembu elincane.
Indlebe okusemathinini eyatholakala kusukela elimnandi obuningi kunezinhlanzi fresh. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo elinjalo isivele ayegcwele seasonings ezahlukene kanye nezinongo. Futhi ngaphambi uyisebenzisela ukupheka isobho, ukudla okusemathinini kufanele kuthathwe kahle. Ngenxa yalesi saury ufuna ukuvula, bese ehlukana izingcezu ezinkulu zezinhlanzi zenziwe kancane kancane. Kepha umhluzi ke uwathele akufanele kube. isobho lizwakale ngcono naye kabili.
Icubungula imifino kanye nokusanhlamvu
Indlebe saury okusemathinini ezidinga ukusetshenziswa imifino kanye nokusanhlamvu. Njengoba isakhi zokugcina, sinqume ukusebenzisa eside okusanhlamvu irayisi. Naye isobho kuyoba okwakhayo ngaphezulu nokunomsoco.
Okusanhlamvu edingekayo ukuhlunga, engahashazanga kahle emanzini abandayo ke bancishwa zonke izinto eziwuketshezi. Njengoba for imifino, kumele ikhasi mncane bese ugaye. isanqante Juicy kufanele grate (wonkana), kanye anyanisi kanye amazambane - uthathe cubes.
Ukuze nendlebe okusemathinini waphenduka elimnandi kakhulu futhi okumnandi, kuyadingeka ngempela wengeze yemifino yokuwugazinga. Kuyinto kanje: epanini wengeze uwoyela kakhulu evuthayo ngomlilo. Ngaphezu kwalokho, endishini ubeke izaqathe ogayiwe kanye anyanisi oqoshiwe. Imifino kumele upheke kuze aze kuphekeke.
Ukupheka izitsha lokuqala phezu kwesitofu
Yini nezinye izithako iresiphi kudinga? Indlebe ukudla okusemathinini yenziwa kuphela ngesisekelo yezingxenye eziye abalwe ngenhla. Nokho, phakathi ukwelashwa ukushisa ku isobho, qiniseka banezela izinongo elimnandi kanye namakhambi.
Ngakho-ke, kulungiselelwa lokhu isidlo kuyadingeka ukugcwalisa 2/3 embizeni thick-ngodonga ngamanzi, bese-ke ngokushesha ubilise. Ngemva kwalokho, izitsha ufuna ukushicilela lavrushku, irayisi cereal amazambane. Izithako ubilise imizuzu mayelana 22, kufanele engeza ezinye usawoti kanye pepper, bese ubeka inhlanzi okusemathinini nge umhluzi elimnandi. Ukuletha ukudla ukuze ethumbeni, kufanele ukulungele imizuzu 4-7. Ngaphezu kwalokho, umhluzi liyadingeka walala imifino kuphekeke kanye namakhambi, ikhava, ubilise imizuzu mayelana 2 bese asuswe ipuleti futhi ake ume kulesi sifundazwe ohlangothini cishe ¼ ihora.
Kahle ukukhonza izinhlanzi isidlo itafula umndeni
Indlebe ukudla okusemathinini, kuphekwe ngokuvumelana iresiphi ngenhla, kuvela eqotho kakhulu futhi flavorful. Ngemva kokukhuthazelela isembozo ipuleti imizuzu engu-15, kungashiwo uthele ngokuphepha, wayithela ezitsheni. Khonza isobho inhlanzi amalungu omndeni wakho Kunconywa, kanye zesinkwa isaladi. Bon appétit!
Indlebe multivarka okusemathinini
Multivarka - ekhishini Imishini, ngaphandle okuyinto Omuny yesimanje kakade ngeke akwenze ngaphandle. Ngenxa yaleli lungiselelo ngeke enze ukudla okumnandi futhi eqotho lokuqala nawo wonke umkhaya wakhe ngaphandle kobudisi. Ukuze wenze lokhu uzodinga:
salmon Canned - embizeni evamile;
pearl ibhali - 1/3 izinkomishi elincane;
utamatisi enososo (mhlawumbe okuzenzela) - 2-3 izingcezu;
Indlela ukupheka inhlanzi isobho? Indlebe multivarka okusemathinini kwenziwe ngokushesha okwanele. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka ekwelapheni ezishisayo, udinga ukuphatha kahle yonke imikhiqizo. Ukuze uqalise ufuna ukugeza ibhali pearl futhi cwilisa emanzini abavamile (ehlungiwe). Kuleli zinga, umkhiqizo okumsulwa efiselekayo ukumelana amahora ambalwa, kodwa okungcono - ngosuku. Ngemva kwalokho ibhali kumele Bilisa amanzi usawoti abavamile (kakhulu abilayo) kuze ephelele isithako umsungulo.
okusanhlamvu Okwenziwe, ungaqala yokuhlanza nemifino ukugawulwa. Amazambane kanye anyanisi kudingeka nquma ku cubes kanye isanqante namanzi (elikhulu) - ukuze grate (ku esikhulu). Ngokuqondene ikhaya kulolo ketshezi utamatisi, kufanele ehlutshiwe ugaye ibe puree usebenzisa blender.
ukwelashwa ukushisa izitsha yokuqala
Indlebe okusemathinini pink salmon multivarka ukulungiselela hhayi isikhathi eside kakhulu. Ukuqala idivayisi kumelwe uthele amanzi inkomishi ukuphuza. Ngaphezu kwalokho, ephansi capacitance edingekayo amazambane, u-anyanisi, izaqathe kanye lavrushku. Kulesi Ukwakheka, izithako kumele kubiliswe imizuzu engu-20 ukuze ucime ohlelweni. Ngemva kwesikhath wesikhathi wathi umhluzi ukwengeza usawoti kanye pepper, kanye pearl kwebhali inhlanzi okusemathinini nge brine. Phela, kuyinto efiselekayo wahlukanise izingcezu ezincane phambi ingxenye lokugcina ukubala.
Ukuze nendlebe inhlanzi okusemathinini waphenduka icebile futhi okwehl 'esiphundu, ukudla kuqala kufanele wanezela slurry utamatisi pickled aqotshwe amakhambi fresh. Govuza izithako adingekayo multivarku futhi uvalwe futhi ushiye ikumodi zokucisha ¼ amahora. Lesi sikhathi okwanele ukuqinisekisa ukuthi umhluzi unezinkolelo ukunambitheka kanye amakha izithako baba okunomsoco nokunomsoco.
kufanele ngifake isicelo kanjani kuqala izinhlanzi isidlo itafula?
Ngemva ukucindezelwa multivarka okuphelele kohlelo, inhlanzi ukudla Kunconywa ukuba sikhuthazele eshisayo mayelana imizuzu 5-11. isobho Ngokulandelayo, elimnandi futhi ocebile kuyadingeka ukuze bandise Skeet. Khonza isidlo eseqedile zezinhlanzi ekheniwe nomndeni wakho kufanele kuphela kube kushisa. Uma wayefisa, kungenzeka ukuba eminye engeza allspice omnyama noma yimuphi omunye condiment. Futhi ukuze isobho zokudoba, qiniseka ukwethula nocezu lwesinkwa emnyama noma emhlophe. Ujabulele ukudla kwakho!
Njengoba ubona, ukupheka isobho nokudla okusemathinini akunzima kangako. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukwenza lokhu isobho can saury hhayi kuphela noma salmon, kodwa futhi ezinye izinhlobo zezinhlanzi.
Salting salmon ekhaya
Stuffed amakhowe okuluhlaza - okumnandi futhi kulula
Ukupheka kusuka amakhowe. Indlela ukupheka boletus?
Pancake Elimnandi ku ubisi curdled, iresiphi
Baking ukhilimu omuncu: iresiphi izitsha ezimbili ezihlukene
Uchungechunge ezinyunyana: esetshenziswa abantu imithi kanye contraindications
Indlela abhalele lo mshayeli (ukwakheka)
Abantu baseFinnno-Ugric: umlando kanye namasiko. Abantu beqembu le-ethno-linguissi le-Finno-Ugric
Impi Main empini ye 1812: Imiphumela, ithebula
Umuthi 'Pregnil ": ukubuyekezwa, imiyalelo
"White Heron". Ukufingqa indaba
Cat amathegi, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo? Silnopahnuschih le nkinga ingaxazululeka impela nje!